Qubanaha » Daawo Sawirrada Maamulka G/Banaadir oo in ka badan 60-kun oo dollar Xagal Ciid ahaan u siiyay dhalinyaro
Daawo Sawirrada Maamulka G/Banaadir oo in ka badan 60-kun oo dollar Xagal Ciid ahaan u siiyay dhalinyaro
Qubanaha.net-Muqdisho-Maamulka Gobolka Banaadir ayaa bilaabay in xagal ciid uu kaga farxiyay qaar ka mid ah dhalinyarada degmooyinka Gobolka Banaadir, iyadoo tallaabadan ay tahay tii u horeysay nooceeda ah.
Xarunta dowladda Hoose ee Gobolka Banaadir ayay ka bilaabatay qeybinta lacagta xagal ciidka ah, iyadoo degmo walba laga keenayo min 75 dhalinyaro oo ah kuwa ka diiwana gishan ee aan mushaarka qaadan
Illaa 1,275 dhalinyaro oo ka tirsan waaxyaha, laamaha iyo tabeelayaasha degmooyinka ayaa markii u horeysay uu maamulku siiyay lacago loogu tala galay Ciida, waxaana qofkiiba soo gaaray $50.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa sheegay in tani ay tahay mid ay dhalinyarada shaqo la’aan ah ay kaga farxinayaan, isla markaana ay ugu tala galeen inay ku ciidaan.
Maamuladii hore ayaa xagal ciid siin jiray shaqaalaha Gobolka Banaadir ee mushaarka qaata, hase ahaatee maamulka cusub ee uu hoggaamiyo Mr Taabid waxaa uu go’aansaday in dhalinyarada aan mushaarka qaadan ee ka diiwaan gishan degmooyinka la siiyo lacagaha ciidka.
Lacageed uu Gobolka Banaadir Xagal ciid ahaan u bixiyay ayaa gaareysa $63,750 (Lixdan iyo saddex kun iyo todobo boqol iyo kontan doollar), taasoo ah lacag aad u badan.
Dad badan ayaa su’aalo ka keenay tallaabadan, kuwaasoo isugu jiray kuwo soo dhoweynayay iyo kuwo dhaliilay oo dood xooggan ka keenay, waxaana ay ay sheegeen inay aheyd in lacagtan faraha badan in Maamulka uu dhalinyarada ugu sameeyo shaqo abuur, halka kuwa kalena ay tilmaameen inay aheyd in loo weeciyo meelo kale oo mudan, sida in mashaariic lagu abuuro ama dadka barakacayaasha ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga la gaarsiiyo, kuwaasoo ay heysato xaalado bani’aadanimo, iyo in lacagtan faraha badan ka baxdo qasnada dowladda hoose ay aheyd wax aan la fileyn.